Maamulka G. Banaadir oo sheegay in ay la wareegeen Xarunta degmada Wardhiigleey. | raascasayrmedia.com
← Mid ka mid ah Xubnihii Maxaakimtii Islaamiga oo loo wado xilka Gudoomiyenimada Baarlamaanka.
Askar ka tirsan Amisom oo ku geeriyoday Qarax lagula eegtay Muqdisho →
May 19, 2010 · 3:48 pm
Maamulka G. Banaadir oo sheegay in ay la wareegeen Xarunta degmada Wardhiigleey.
Maamulka Gobolka Banadir ayaa shaaca ka qaaday in ay maleeshiyaadka dowladda ka soo horjeeeda kala wareegeen xarunta degmada Wardhiigleey oo ay horay ugu sugnaayeen.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed C/laahi Cariig oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay in maamulku degmada iyo kan gobolkuba ay maanta shirk u yeesheen xarunta degmada, isagoo sheegay in degmada laga bilaabay howlo nadaafadeed oo dhirta looga jarayo halkaasi.
Afhayeenka ayaa sheegay in maanta shir ay ku yeesheen xarunta degmada kaas oo ku saabanaa sidii loo xoojin lahaa amaanka degmada, looguna guntan lahaa xureynta goobaha degmada ka tirsan ee maleeshiyaadku heystaan.
Kulankaas oo ay shir gudoominaysay gudoomiyaha degmada Wardhiigleey deeqo C/qaadir Axmed ayaa sidoo kale looga hadlay sidii loo furi lahaa wadooyinka degmada ee ay maleeshiyaadku boholaha ka qodeen.
Afhayeenka maamulka Gobolka banaadir Maxamed C/laahi Cariig ayaa sheegay in talaabadi ay qeyb ka tahay dadaalada ay maamulka gobolku dib ugula wareegayaan dhamaan degmooyinka Gobolka Banaadir, wuxuuna sheegay in dhawaan meelo kale ay ciidamada dowladda gaari doonaan.